Ihe ndi ojii leghaara anya (akụkụ 3) - Afrikhepri Fondation
Kedu Ụjọ Ndị A Chọrọ (Akụkụ 3)
min gụọ 15 min
egwu Oha obodo ma ọ bụ ụlọ ọrụ, Cheikh Anta Diop ugbua ahu uzo di n'etiti omenala islam na nke ndagwurugwu Nile nke buru ya n'iru otutu otutu afo. Ọ na-ede, sị: "Hel nke okpukpe Ijipt nọchiri anya n'ili nke Seti Ier, nna nke Ramses II (XIXe usoro eze, 1300 av. JC.) Agwọ dị egwu na-eji etu mmiri na-eme ka mmiri dị egwu kpuchie, nke dị n'elu hel, ndị ndị na-elekọta ụlọ ya na-agba ọkụ. Nwoke ahụ nwụrụ anwụ, nke chere ihu n'ọnụ agwọ ahụ, na-akwado nanị site na omume ndị o mere n'oge gara aga ịgafe mmiri a ma rute paradaịs. Ọ bụrụ na ọ dị mma, ọ ga-azọpụta. N'aka nke ọzọ, a na-amanye ya n'ọkụ ala mmụọ nke na-ere ya. Nke a bụ siratal moustakhima nke Islam, afọ 1700 tupu ọmụmụ nke onye amuma Muhammad, ma na-enwetakwa njikọ ndị a na-apụghị ịgbagha agbagha nke dị n'etiti okpukpe ndị nna ochie nke Egypt na okpukpe ndị e kpughere ekpughe. Ụlọikpe Osiris (Aras nke Islam), ụbọchị ikpe ikpe ikpeazụ ". (Oha obodo ma ọ bụ ụlọ ọrụ, P.417).
TheAras nke Islam, ebe ikpe ikpe ikpeazụ, nwere ihe ọ pụtara home, na ọkụ. Theophrastus Bouju, onye na-arụ ụka banyere 17e narị afọ na odeakwụkwọ nke Count of Soissons, bipụtara n'afọ 1604 ọrụ a gosipụtara Ụzọ nke Akwụkwọ Nsọ na-eme ka o doo anya, ndị okpukpe nile na ndị jụrụ okwukwe. N'izo aka n'echiche nke ebe ịchụàjà na àjà nsure ọkụ, onye edemede ahụ na-ede na peeji nke 626: "(...) Anyị ga-aza nke a na Monsieur d'Eureux na anyị ekwesịghị ikwubi n'oge oge Minutus Foelix enweghị ebe ịchụàjà; ma na ha enweghŽ ebe] b la dŽ icheiche n'echiche nke na ndŽ náekpere ar sŽrŽ okwu ah, n'etiti : nke ahụ bụ ikwu, dịka ọ na-egosi ebe ịchụàjà na ọkụ: n'ihi na nke ahụ bụ ihe Latins na-aghọtakarị n'etiti, ya bụ, ebe obibi dị nsọ, ebe na oche a chọrọ maka ọkụ nke àjà, n'oge ụfọdụ ụfọdụ nwekwara ụfọdụ, dị ka okwu Varon na Isidore, si nweta ab ardendo; na nke ahụ ọbụna na-ezo aka na Latin ilu na-ekwu proaris na focis, na-eguzogide ha n'ebe ibe ha nọ, dịka ebe obibi dị nsọ na ebe obibi anụ ụlọ "(Ụzọ nke Akwụkwọ Nsọ kwadoro ... p.626).
Le Akwụkwọ ọkọwa okwu ụwa site na Ọbá Akwụkwọ Ọwụwa Anyanwụ Ụwa na-ekwu, sị: "Araf (Aras). Ụdị ụdị nke okwu Arabic bụ Orf (Ors): ma ha pụtara ebe dị n'agbata Paradaịs na Hel nke ndị Mahometan. Ụfọdụ na-ekwu na ọ bụ nkewa dịka ákwà mgbochi, ndị ọzọ na-achọ ka ọ bụrụ ụcha ma sie ike. E nwere isi nke Koran Sourat al Aras nke anyi guru okwu ndi a: N'etiti Onye a gọziri agọzi na onye a na-agbaghara enwere ákwà mgbochi ma ọ bụ nkewa; na Aras e nwere ndị ikom na ndị mmụọ ozi n'ụdị mmadụ ndị maara onye ọ bụla n'ime ndị nọ n'ebe a site na ihe ịrịba ama ha na-ebu. Ihe a na-akpọ veel na amaokwu a, a na-akpọ ya aha ọzọ n'isiakwụkwọ ahụ, mgbidi siri ike. Ndị Alakụba ekweghị na àgwà nke ndị nọ n'ebe ahụ. Ụfọdụ na-asị na ọ bụ Nna Ochie na-amuma, na ndị ọzọ chọrọ ka ọ na-Martyrs na nke a kasị mara na ịdị nsọ n'etiti ndị kwesịrị ntụkwasị obi, onye e nwekwara mmụọ ozi bụ ndị nwere ụmụ mmadụ ọnụ ọgụgụ. Otú ọ dị, e nwere ọtụtụ ndị dọkịta na-esiteghị na ebe a Limbo, dịka ọ ga-adị ka nkọwa nke e meworo, kama ọ bụ purgatory, nke na-anọgide na nke ndị kwesịrị ntụkwasị obi, ndị ọma na omume ojoo na nha nhata, na ha erughi ka ha banye na Paradais, ma ha erughi eru ka ha maa ha ikpe nke oku oku, ha na-ahu site na ebe a ebube nke ndi a gọziri agọzi, ha kelee ha n'olu ha. obi ụtọ, mana ọchịchọ obi siri ike ha ga-esonyere ha, bụ oké iru uju maka ha, n'ihi na e nwere otu amaokwu ahụ : ha abanyeghi na ha choro ibata. Mana n'ikpeazụ, n'oge ikpe ụwa dum, mgbe mmadụ nile, tupu e kpee ha ikpe, ka a ga-ekwu ka ha sọpụrụ Onye Okike ha, ndị a kpọchibidoro n'ebe a, ga-akpọ isiala n'ihu Jehova site n'ife ya ofufe; na site n'okpukpe a nke ga-abụ ebe ha ruru, ọnụ ọgụgụ nke ọrụ ọma ha na-abịa karịa nke ndị ọjọọ, ha ga-abanye n'ebube dịka okwu ndị a nke otu isi: Tinye Paradaịs ebe ị ga-enwe ihe ọ bụla ị ga-atụ egwu, ị ga-enwekwa onwe gị pụọ na nchegbu gị niile (Universal Dictionary, 238).
Ihe okwu ahụ pụtara ArasLatin na-eme ka ọ bụrụ ụdị archaicasa ebe ọ bụ na e nweela ọgba aghara, nke ahụ bụ ikwu mgbanwe nke "s" na "r". Macaw, dị kaasa, pụtara home, ebe ịchụàjà a raara nye àjà ahụ ọkụ. O kwesiri iburu n'uche na echiche nkeọku ebe a chọtara ya.
Okwu a, sitere na Latin gbaa ọsọ, "Zuru", na caustica, "Na-ere ọkụ", aghaghị ịghọta na ọ bụ nke anyanwụ. René Preys na-akọwa ememe Kemite nke a na-atụkwasị na nchekwa: "Ọ bụrụ na akwụkwọ ndị eze na-ahapụ inwe obi abụọ ruo oge ụfọdụ, na-akọwa ya dịka onye na-egbu anụ, onye na-etinye ọnyà (stpwNa ọkụ, kọlụm na-ewepụ ihe mgbagwoju anya a ngwa ngwa. Eze bu dike, nke di ike, onye na egbu umu anumanu achuru n'ime oku. Okwu ahụ nr, na-eji kọwaa ọkụ, na-apụta ìhè n'ụzọ doro anya nke uraeus. Site n'inyocha anya ọkụ, onye nchịkọta akụkọ ahụ na-ekwupụta njikọ dị n'etiti ikpo ọkụ anụ ahụ na mbibi nke ndị iro nke chi nwanyị site na ọkụ. Usoro nke epithets doro anya: a na-agba ọkpụkpụ nke ndị nnupụisi ọkụ, ebe a na-etinye ndị iro nke nwanyị nwanyị ọkụ maka anụ ahụ ha-ederede ebe a na-eji okwu ahụ eme ihe h3w - ṅụrịrị chi nwanyị. N'ikpeazụ, e gosipụtara nzube nke ọrụ a kemgbe ka nke chi nwanyị na-enwe obi ụtọ site na nhọrọ (stpw) ndi nnupu isi (...) Na ebe a bu, akwukwo a Nwa agbọghọ na-azụ Ijipt na-eme ka chi nwanyị a na-enwe obi ụtọ na-emegide Sekhmet, nwanyị chi nwanyị iwe. A na-ahụkwa akwụkwọ a na agwọ ọrịa nke Hathor (n'ebe ọwụwa anyanwụ) ma si otú a gosi njikọ dị n'etiti ọdịdị nke onyinye na onyinye nke ime ka chi nwanyị ahụ nwee obi ụtọ (...) "(Nkọwa nke Stifrum Demeure na Ocheeze nke ..., 295-296).
Onyinye Hibru Taara (= tsarab) nke pụtara "ọkụ", nke sitere na ntuputa ara. Tara, na Central Afrika (Ekañ), bu aha akwukwo nke a na-akpo iji mee ka anyanwu di. P. Laburthe Tolra na-ekwu, sị: "A na-akpọ ya n'asụsụ nke ire naanị site na mkpịsị, isi igwe (nló ndzób), anyanwụ na-egosi, dị ka isi ihe nke elu igwe, iji kere òkè na njirimara Chineke. Ọ bụ ya ka anyị ga-ahụ ndị na-eto eto nke ụdị So iru aka, mkpịsị aka na-agbasa, na-eti mkpu Tara ! nna ! Dị ka nna Guillemin si kwuo, n'ogemetúnen m ngom Zambáọ bụ anyanwụ na-abọ n'ehihie na nna ochie ma ọ bụ ngangán kama nke ahụ Zambama ọ bụ nwa ya nwanyị, iji kelee afọ gara aga wee rịọ maka ihe ọma dị mma "(Initiations and Secret Societies in Cameroon, p.37). Tara maka ikpe a kapịrị ọnụ, nnukwu Burned One, Sun, bụ Ra, Chineke ukwu nke Ounou (Heliopolis), nke otu n'ime ụdị a maara bụ Ra Hr Akthy (Horus nke abụọ Horizons).
Aha ikpeazụ a, Ra Hr Akthy, laghachi,dika Latin gbaa ọsọ, iwu nala, na echiche nke dumness, oke na isi.
Mgbọrọgwụ ara, jikọtara ngwa ngwa "ịgba ọkụ," bụ nke na-asụ Grik tartaros, " Tartar "(Tará-Tará). Na akụkọ ifo Gris, Tartarus, nna Typhon, bụ chi dị egwu nke na-eme ka ọkụ na-ere ọkụ, ebe kachasị elu nke ụwa, nke dị n'akụkụ Champs-Élysées. Ọ bụkwa ebe a na-akpọchi Titans. dị ka Hades, Tartarus kpọrọ ma chi ma ebe "ochichi" ya. Tarana Buddha, enwere chi di ukwu, na Tara, na akụkọ Celtic (Ireland) bụ mpaghara e kewara n'ime alaeze anọ, dị ka Douat, oche nke ndị eze kachasị elu na druids, bụ ebe e mere ebe ahụ Ememme Tara, mgbakọ dị elu nke mba ahụ.
"Tará" bụ okwu n'azụ Grik tello, "Ibili", na-ekwu banyere kpakpando, telos, "Mmezu", "mmecha", site na Latin Torreó, "Dry", "ọkụ" (torrid), ala, tellus"Ala", dị ka ihe na-emegide mmiri, na-emepụta ikuku na ọkụ (Shou-Tefnut), mmekọrịta anyị ga-amụ oge ọzọ. " Tata »,« suckled , Etc., kwukwara maka " Tara ".
ABBA, "Nna" n'asụsụ Grik, Hag n'asụsụ Arab na n'ọtụtụ asụsụ Africa, ghọọ "Abbot", "Nna", ịkọwa isi nke abbey. Anyị na-ahụ otu ihe ahụ rab de rabbi, "Master", "onye ndu", bụ mmalite nkeabbot nke asụsụ French. Ab n'asụsụ Hibru pụtara "nna", "isi", "onye nchoputa", "nna nna", "eze", "isi", wdg.
"Ra", Chineke ukwu a, ya na okwu ndia rab, "Master", na ara (s), "Ebe obibi ebe obibi", "nọrọ", nke si na ya pụta, bụ ihe antonomases maka "Black", ya bụ ikwu okwu iji kọwaa agba ojii. Anyị ga-eguzobe ya ọzọ Knefaha ọzọ nke Ra, nke na-egosi ya dị ka demiurge na nke Mayassis na-echetara anyị na agba ya na agba oji (Mysteries and Initiations of Egypt oge ochie).
N'okwu nke ndị Arab, aha nke taa na-eme ka a mata obodo nke ụmụ Semitic, ọ bụ ezie na Kemite (Hagar, aha nke na-eweta otu "Rad", Ikara, Adjara, wdg). mgbe omenala Abraham, anyị nwere ike icheta ihe Bertram Thomas na-ekwu: " Dị ka Sir Arthur Keith, otu n'ime ndị kasị a ma ama ọkà mmụta banyere mmadụ nke ụwa bụ ndị na-amụ ọkpụkpụ nke oge ochie Arab dị ka oge a, na mbụ bi Arabia nwere ihe ọ bụla na-eme na Arab bụ ndị maara taa: c bụ ndị nwere nnukwu ọchịchịrị. Otu eriri ụmụ mmadụ na-eme Negroid na-agbatị obosara nke oge ochie site na Africa ruo Malaysia "(TheArabs, p.339).
Aha ahu "Arab" bu ndi choputara ndi mmadu nwere nnukwu ihe gbara ọkpụrụkpụ, ndị mbụ bi na Arabian Peninsula, na-ebi n'ebe ahụ tupu ọbịbịa nke Asians, na onye a ga-amata dị ka ndị na-elekọta saịtị nke Kaaba na ndị bidoro Islam, okpukpe nke Moors. Abd al-Muttalib, bụ nna ochie nke onye amụma Muslim, nwere ụmụ iri. Al Jahiz (776-869 EA), otu nke kasị ukwuu prose dere nke oge gboo Arabic akwụkwọ bụ onye bi na Basra (Iraq) na a oge mgbe ụwa Islam nọ na-enwe agbụrụ iro esiwanye ọcha na Black, bipụtara akwụkwọ aha ya Ebube otuto nke ndị ojii na ndị ọcha nke o mere ka agbụrụ agbụrụ nke onye amuma Muhammad. Al Jahiz kwuru na Abd el-Muttalib mụrụ " ndi-isi iri, nwa dị ka abalị na mara mma ". Otu n'ime ndị isi ahụ bụ Abdallah, nna Muhammad.
Nkwupụta a na-ahụ ihe akaebe ọzọ taa maka ekele nke ihe omimi nke na-egosi na ndị mbụ bi n'ebe ndịda Arab, nkeArab Felix (Arabia Heureuse) nke ndị Rom, ala ngbapụ Benou (Phenix), ngosipụta nke Ra na Osiris ndị metụtara sothiaque, bụ ndị ojii (lee Bertram Thomas).
James Bruce, onye nlere anya nke Britain nke na-eleta mpaghara na 18nke narị afọ, kwuru, sị: "Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri na anọ na narị afọ anọ, bụ nke dị n'etiti obodo Peninsula nke Arabia, e nwere Ụlọ Nsọ, bụ nke onye ahụ nọ na-asọpụrụ kasị ukwuu. Ndị Arab na-ekwu na ọ bụ n'ebe ahụ ka Adam kụrụ tent ya mgbe a chụpụrụ ya na Paradaịs Ụwa. Ma Eve, site n'ihe mberede, nwụrụ, e wee lie ya n'osimiri Oké Osimiri Uhie na Jidda; na, njem ụbọchị abụọ, na East nke obodo a, otu ka na-egosi ili ya, kpuchie ya na kapeeti nke ahịhịa ndụ, nke dị ihe dị ka iri ise na ogologo. N'ụlọ nsọ nke Peninsula, e nwere nkume ojii nke a na-ekwu na Jacob nwere, dịka Akwụkwọ Nsọ na-akọ, ọhụụ nke ndị mmụọ ozi, bụ ndị rịdatara ma rịgoro n'ogo nke metụrụ Eluigwe. Akwukwo a bu kwa ya, o bu ihe di mfe, na Sesostris wuru ulo a na njem ya na Arabia; nakwa na a na-efe Onyeisi a n'ebe ahụ, n'okpuru aha Osiris, dịka ọ dị n'oge ahụ n'Ijipt dum ". (Njem Nubia na Abyssinia, Mpịakọta 1, p.588).
Ngụgụ okwu 7: Site na mmalite nke okwu ahụ bụ "Negro"
Hr na Ijipt oge ochie kwekọrọ na Coptic: xo (ma ọ bụ), na "hoore" xoox (kok) Serere na Wolof, nke nwere "isi" na "kernel" (nkpuru). Na Bassa, "isi" bụ "ma", dika okwu "nwoke". N'Africa, e nwere ndị mmadụ n'otu n'otu. Akpa Siri na Wolof bụ na mmalite kopf German (dika Schwarzkopf = Black Head). "Blackhead" bụ nsụgharị nkịtị nke "onye Etiopia". Ọ bụ n'ihi na, n'ezie, ọkpụkpụ ndị Ijipt hr ịsị "isi", "ihe dị n'elu", pụtara ihe atọ ozugbo: 1) Isi, 2) Ihu, 3) Ọkụ. Ya mere, site na "onye Etiopia" anyị pụtara "ihu ọkụ," ya bụ, ihu ma ọ bụ isi ojii. N'ezie, anyị na-asụgharị nanị hr, nke bu nkpu okwu nke na-enye ohere iji dee aha "Horus".
Ntak emi "Negger" ọwọrọ uyo?
A na-eme nke a dịka usoro usoro ihe gbasara Kemite nke na-egosi isi na agba ojii. Kneg, ihe na-emetụta "Niger" (nwa ojii na Latin) abụghị nke ọzọ Knef Egypt, isi, demiurge; n'ihi, n'ezie, na f na ph enwere ya g na-agbaso iwu ndị yiri ya. Okwu a, Knef ou Kneg, bụ ebe okwu ahụ bụ " Knight "Onye nsụgharị" sụgharịrị n'asụsụ French. Na Knight e nwere Night, "Night", "nwa". Nig-ht et Nig-ger na-ewukwasị n'otu mkpọtụ ahụ Nig / Neg Nwa. Aha grécisé Nephthys na-enyekwa otu ihe ahụ Neph (nave) ma ọ bụ Neg, nke sụgharịrị "black" nke pụtara ọdịiche dị n'etiti Neterous.
Na French, "Nig" kwekọrọ na " nique ". "Niquer" na ochie French pụtara " tichapụ isi gị "; ya mere, njikọ ahụ anyị kwadoro na isi.
Ihe atụ: Picnic.
"Ndị Germany na-enwekwa ọkpụkpụ ha, nke nwere otu ihe ahụ dị ka nke anyị. Piken pụtara ịsụ, ịkwa. Niken pụtara ịkwa ụda. Ya mere, Picnics bụ ihe ịrịba ama nke isi "(François Noel, Philo-logie française, 627). Pic-nic nwekwara uche nke onwe okwu.
Picnic ma ọ bụ Picnic na-erite site n'okwu ahụ bulie-a-nigger ejikọtara na lynchings nke Blacks na United States. Ọ bụ maka "ịchọrọ" onye oji ka ọ dọọ ya na-eme ka ọ bụrụ ohere ezumike maka ezinụlọ. Ụfọdụ ndị edemede na-enweta omume a site na omenala anthropophagy oge ochie n'ihi na ịchọrọ-a-nigger pụtara n'ụzọ nkịtị "Beak-a-black", "eat-a-black", "nic" bụ ihe njiri maka nigger n'asụsụ Bekee. A na-echeta picnic ahụ dị ka ntụgharị nke nwa ojii na fim ahụ " Rosewood Site na John Singleton na 1997, aha ya bụ otu obodo dị n'Africa nke dị na Florida bụ nke a gbara ọkụ na 1923.
Ma ọ bụ nke mbụ ma ọ bụ nke abụọ nke ịkọwa okwu ahụ bụ "picnic", anyị na-abanye n'ubi mkpụrụ okwu nke okwu bụ "nique" nke na-ezo aka na agba ojii ma ọ bụ isi.
Na Kemet, a na-akpọ obodo Horus Nekhen (Nxn). Ọ bụ na Nekhen ka a chọtara ọmarịcha pallet Narmer. Ndị Gris kpọrọ Nekhen Hierakonpolis dị ka Horus si kwuo, ọ bụghị nsụgharị nkịtị nke okwu Nekhen nke kwekọrọ na Grik Knychoo sụgharịrị dị ka "ikpokọta", Nekhen bụ isi obodo Narmer mgbe ọ malitere ime ka Upper na Lower Egypt dị n'otu. Ọ bụ na Nekhen ka emume nke Sema Taouy mere, ya bụ, ememe nke mgbakọ ahụ, ịdị n'otu nke Upper na Lower Egypt. Nekhen nwere ihe ozo karia ozo n'ihi na Nekhen, dika isi obodo, bu isi obodo ahu, ihe omumu nke Kemet na-acho ala a ahụ mmadụ. Ka oge na-aga, a mara Nekhen na obodo ahụ na-agagharị agagharị, ya bụ, nke mere njikọ dị n'etiti Upper na Lower Egypt.
De Nekh, Knychoo n'asụsụ Grik, na-eweta German Nekke nke na-egosi n'olu ma ọ bụ nape, nke ahụ bụ ịkọ ọsọ ọsọ n'etiti "ihe dị n'elu", nke bụ isi isi, na "ihe dị ala", nke ahu bu aru. onye makwaara Nekhen, isi obodo, ghọtara na obodo azụ. Agbanyeghị, mgbe anyị mepere akwụkwọ ọkọwa okwu anyị, anyị na-amụta na Nekke (Neck in English) sitere na radikal “Indo-European” dị egwu. Kneg nke na-egosi azụ isi (n'olu). Asụsụ a na-asụ na-eme ka ọ bụrụ isi okwu (dịka: redneck = redneck, nzuzu, ihe ọ bụla n'isi). otú a, Kneg na uche nke isi na-eme na-abụ synonym maka Kopf, isi, ebe anyị na-ahụ ntụgharị op site na Aithiops pụtara echiche, ìhè.
Okwu ahụ bụ " Wales »de -Akwụ de Galles a na-ewu ya n'otu mkpọtụ ahụ hr. Nke na-akọwa ọdịdị nke ọdịda Afrika na England na ọdịnala nke ndị nkịta, Knight nke pụtara n'ụzọ nkịtị Negro ". Morien (Moor), onye isi ojii, bụ otu n'ime ọnụ ọgụgụ ndị isi nke Knights of the Round Table. Gilead, aha nwa Lancelot, na àgwà bụ isi nke ọchịchọ maka Grail, pụtara "hawk", ya mere njikọ ahụ dị na Horus na Ngalo. Anyi egosiputa ebe ozo sitere n'Afrika nke Grail Gral na mmekorita ya na ememe Abydos (Osiris). Galaxius bụ otu n'ime nicknames nke Apollo, n'ihi na, n'ezie, a na-ekwu na mmiri ara ehi bụ Gala na asụsụ Grik ma na-ezo aka na Horus nwa nke Isis bu n'obi. Aha ahụ bụ "Scotland", Scotland, na-enweta site na Grik Scotia, Aha Aphrodite (Hathor) onye aha ya bụ Melanoesis, Black. Anyị ekwuola ya Achịcha nke Tarà nke omenala Celt, na ihe nlereanya nke Kemite oriri, anyị agaghị alaghachi.
A na - akpọ Isis n'oge na -Navigum Isidis). Nchoputa a nke Isis na igodo bu iji cheta njem nke o mere n'ugwu rue obodo Byblos (Byblus, ihe omuma nke Delta n'ihi na a na-akpọ papyrus Byblus: sitere n'okwu Bible) na-agbaso akụkọ ifo (Passion nke Osiris). Ndị ndu mmiri Kemati, bụ ndị ga-abanye n'àgwàetiti ahụ, ga-enwe ohere nke akụkụ nke ụgbọ mmiri a, ọdịnala a nọgidere na-abụ na osimiri Thames na-adọta aha ya kpọmkwem site na Isis. Thames ma ọ bụ "osimiri Isis", nke "Thame-Isis", ebe " Tamesis E mebiri Celt Tamise site na ndị na-ese foto nke Queen Victoria.
Na Gaul, Gallia na Latin. Ndị eze Merovingia mbụ mekwara ka chi ndị Kemite bụrụ ihe asọpụrụ (Childeric). Aha Childéric pụtara " Nwatakịrị King "(nwa = nwata, eric = regis, eze) aha Horus nke ndị Kemite Pharaohs. A họpụtara Paris dika Isis. Nnyocha nke anyị bipụtara n'afọ gara aga gosipụtara mmalite Kemite nke ndị eze mbụ nke France, anyị agaghị alaghachi.
Nchịkọta Mmakọ: Họrọ Ka I Mee Ka Multiga Gị nke Ọma - Darren Hardy (Audio)
Thanatos, isi okwu ikpeazụ - Akwụkwọ edemede (2019)
Ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme gwara anyị na Ijipt bụ mmepeanya ndị Negro-Africa